I-Lingerie Brand inceda abasetyhini ukuba bavavanyelwe umhlaza wamabele
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Lingerie Brand inceda abasetyhini ukuba bavavanyelwe umhlaza wamabele
Adore Me - ILogo in Purple
Ngembeko yeNyanga yoKwazisa ngoMhlaza wamabele, ibrand yempahla yangaphantsi kunye nomthengisi we-intanethi uAdore Me ubambisene noMbutho woMhlaza waseMelika ukwazisa ngokubaluleka kokuvavanywa.
Ngo-2020-ingakumbi ngexesha lezona ndawo zimbi kakhulu zobhubhane-kwaye kwakho ukuhla kwe-60% kwizinga lokuhlolwa komhlaza wamabele wonyaka. Iimammograms yeyona ndlela isebenzayo yokubona umhlaza wamabele kwasekuqaleni-kwaye ngenxa yokuba uninzi lwabasetyhini bephose imammogram yabo yonyaka, kuqikelelwa ukuba kunyuke kakhulu iimeko ezingakhange zibonwe ngo-2021.
Ukuphakamisa ulwazi ngokubaluleka kokuvavanywa, i-Adore Me ithathe inxaxheba kwi-American Cancer Society's Making Strides Against Breast Cancer Walk eCentral Park. “Kwakumnandi ukubona amaqela ethu ohlukeneyo eqokelela imali kwinkampani iphela, enxibelelana nabasinde kumhlaza wamabele, kwaye emamele namabali abo. Side saba nentente ekuhambeni ukuze sibonelele abathathi-nxaxheba ngezixhobo zokufaka ibra simahla,” utshilo uChloé Chanudet, iGosa eliyiNtloko leNtengiso eAdore Me. “Umhlaza wamabele ngunobangela wokuba i-Adore Me ibisoloko isondelelene neentliziyo zethu, kwaye siyakuhlala siqhuba nencoko yokuya kuxilongwa-ngenyanga nasemva kwayo yokwazisa ngoMhlaza wamabele.”
Intsebenziswano ka-Adore Me ikwaquka umnikelo othe ngqo kwi-American Cancer Society, ingxowa-mali yangaphakathi yenkampani, kunye nonxibelelwano kwizigidi zabathengi be-Adore Me malunga nokubaluleka kokuvavanywa. “I-American Cancer Society iyayibulela inkxaso ka-Adore Me, okhuthaze abathengi kunye noluntu ukuba luthathe inxaxheba ekunyuseni izinga lolwazi kunye nemali yokuphelisa umhlaza wamabele ngokuhamba kwethu kweMaking Strides Against Breast Cancer,” utshilo uMeagan Hallworth, uMphathi woPhuhliso oPhezulu kwisebe. Umbutho womhlaza waseMelika. "Siyavuya ngale ntsebenziswano, kwaye kunye siza kubhiyozela abasindileyo kunye nabaphumeleleyo, kwaye sincede ngenkxaso-mali yekamva lophando lomhlaza webele kunye neenkqubo."
I-American Cancer Society icebisa abafazi abangaphezu kweminyaka engama-40 ukuba bacwangcise i-mammograms rhoqo ngonyaka, kunye nabasetyhini abangaphezu kweminyaka engama-20 ukuba bazihlolele rhoqo ngenyanga.